Nhau - TIG welding sheet simbi: yakakwana kupinza mapepa matete
TIG welding inonyanya kukodzera simbi yakatetepa uye inogona kushandiswa kune zvese zvinoenderera uye nzvimbo welding. Dzidza zvakawanda pamusoro pezvimiro zvayo.
TIG (Tungsten Inert Gas) welding sheet simbi zvirokwazvo ndiyo imwe yedzakajairika nzira dzewelding. Iyi i arc welding process ine infusible (tungsten) electrode, yakachengetedzwa neinert gasi (magasi anonyanya kushandiswa ndeye argon kana helium), iyo inogona kuitwa kana isina simbi yekuzadza.
TIG welding inonyanya kukodzera welding yakaonda sheet simbi uye inogona kushandiswa kune zvese zvinoenderera uye nzvimbo welding. Iyi chaiyo welding tekinoroji yakatanga kugadzirirwa indasitiri yezvendege munguva yeHondo Yenyika Yechipiri, kutsiva rivets nemawelds mundege (yakareruka nekupikisa kwakafanana). Kubva ipapo, kushandiswa kwayo muindasitiri yeindasitiri kwakawedzera zvakanyanya.
TIG welding sheet simbi inopa majoini emhando yepamusoro uye saka yakanyatsokodzera kupinza mashizha matete, kusiyana nemaitiro echinyakare welding apo njodzi yekubaya simbi yakakwira.
TIG (Tungsten Inert Gasi) Welding inonyanya kushandiswa kupinza zvimedu zvitete zvesimbi isina tsvina uye zvisiri-ferrous simbi sealuminium, magnesium, uye alloys emhangura.
Versatile welding process ine yepamusoro mhedzisiro
Complex process inoda hunyanzvi hwepamusoro
Zvishoma asi zvakanyanya kunyatsoita welding process; inogadzira weld inotaridzika zvakanaka
Inogona kugadzira maweld anonyengerera, senge akatenderera kana S curves
Iyo TIG welding sheet simbi inoshanda sei
MuTIG welding, zvinhu zvinopihwa manually nerubatsiro rwebhawa kana kuti otomatiki newaya yakarukwa. Iyi nzira yakakodzera kuita zvemhando yepamusoro welds kana kubatanidza hutete hwesimbi isina tsvina nekunyungudutsa mipendero, nekuwedzera kudiki kwezvinhu (mune dzimwe nguva kunyangwe pasina kuzadza zvinhu).
To TIG weld mashizha matete, a torch inoshandiswa iyo tungsten electrode yakaiswa, iyo iyo inodzivirira inert gasi inoyerera pamvura inonyunguduka. Mushandi anofambisa tochi pajoini kufambisa bhati rekunyunguduka, kuisa iyo infusible tungsten electrode pahupamhi hwemamirimita mashoma uye kuchengetedza chinhambwe ichi chakagadzikana.
Panguva yekushanda kunokosha zvikuru kudzivirira electrode kubva pakusangana kwakananga nechidimbu chinosungirirwa, sezvo tungsten tsvimbo yaizonamatira pajoini uye kumisa welding.
Thyhmetalfab: yako poindi yereferensi yeTIG welding yakatetepa sheet simbi
Iyi sheet welding process imhinduro yakanaka yekuwana mhedzisiro isina maburrs, asi zvinotora vanonyanya hunyanzvi vanoshanda, kunyanya kana zvasvika pakubata mashizha matete, kuwana mamiriro ehunyanzvi TIG welding.
PaMinifaber isu TIG weld sheet simbi mumba, munzvimbo yakachengetedzwa uye inodzorwa, nekudaro optimize nguva nemitengo yekugadzira yakaoma, yakapedzwa kana semi-yakapera zvigadzirwa.
Muchina wedu unotiza unosanganisira MIG-TIG anthropomorphic welding robhoti uye 8 welding michina yakanyatso hunyanzvi muTIG, kuburikidza naro isu tinogadzira ese semi-akapedza uye akapedzwa zvigadzirwa zvine yakakwira kukosha.